Maxay yihiin astaamaha iyo adeegsiga heerkulka sare iyo miirayaasha hawada ee waxtarka sare? -War-News News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Maxay yihiin astaamaha iyo adeegsiga heerkulka sare iyo miiraha hawada sare?
Waqtiga: 2011-05-14 Hits: 68
Heerkulka sare iyo hufnaanta Hawada Filterku waa sheygayaga ugu muhiimsan, marka la barbar dhigo miirayaasha kale, saamaynteeda shaandhayntu waa mid aad u wanaagsan, waxaana loo isticmaali karaa jawiga heerkulka sarreeya. Marka, waa maxay astaamaha heer-kulkan sare iyo Shaandhaynta Hawada sare leh, halkee looga isticmaali karaa in lagu dayactiro?
Marka hore, heerkulka sarreeya iyo waxtarka sare ee Sifeeyaha Hawada ayaa leh:
1, heerkulka sare iyo miiraha hawada sare ee leh warqad miiraha muraayadda muraayadda ah oo aad u fiican oo loogu talagalay shaandhada, si loogu dheellitiro warqad, aluminium aluminium iyo qalab kale oo isku laaban kala goynta, shaashadda cusub ee polyurethane sealant, xaashida galvanized, saxanka birta ah, aluminium aluminium The
2, heerkulka sare iyo waxtarka sare ee Filter Air ahama steel kordhin kartaa awoodda guud ee shaandhada, guddiga aluminium aluminium ilaalin karaa warqadda filter, yareeyo iska caabin ah dabaysha, iyo sidoo kale ay warqad filter fiber galaas kala dheereynta aagga filter, sidaas darteed wuxuu leeyahay awood boodh, Resistance waa yar yahay waxtarka miiraha ayaa aad u sareeya.
3, heerkul sarreeya iyo waxtarka sare ee shaandhaynta Miiraha Hawada waxay noqon kartaa jawiga 250 digrii Celsius muddada-dheer isticmaalka, ma soo saari doono baxsi.
4, heerkulka sare iyo miirayaasha Hawada sare ayaa u adkeysan kara kuleylka degdega ah ee degdega ah ilaa 350 darajo Celsius, heerkul joogto ah ilaa 250 darajo, iska caabin heerkulka sare, waxqabadka waa mid aad loogu kalsoonaan karo.
Marka labaad, isticmaalka heerkulka sare iyo miiraha hawada sare:
Maaddaama heerkulka sarreeya iyo waxtarka sarreeya ee sifaynta Filterka, u adkeysiga heerkulka sare uu wanaagsan yahay, sidaa darteed ay u adeegsaneyso baaxad ballaaran, waa:
1, heerkulka sare iyo miiraha Hawada Sare ee badanaa loo isticmaalo qaboojiyaha iyo nidaamka hawo-mareenada, ama foornada hawo kulul, foornada, foornada nadiifka ah ee nadiifka ah;
2, heerkulka sare iyo miiraha hawada sare ee filtarka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa aerospace, elektaroniga, semiconductors, optoelectronics, lenses iyo warshadaha kale ee waxsoosaarka ee nadaafad darada munaasabada;
3, heerkulka sare iyo miiraha Hawada Sare ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daawooyinka jirka lagu buufiyo, looxyada wareega, cuntada lagu farsameeyo iyo qalabka kale ee lagu nadiifiyo dhamaadka heerkulka ayaa aad u sarreeya, iyo shuruudaha nadaafadda sare.
Seddexaad, heerkulka sare iyo hufnaanta Hawada Sare sida loo dayactiro loona dayactiro
1, marka heerkulka sare iyo waxtarka sare ee Miiraha Hawada loo isticmaalo in muddo ah, haddii siigada gudaheeda ay ka sii badnaan doonto, iska caabbinta dabayshu aad ayey u weyn tahay, taas oo u baahan in la nadiifiyo miiraha gudaha ama la beddelo.
2, isticmaalka heerkulka sare iyo miiraha hawada sare ee howshu socoto, waa inuu si joogto ah ugu xirnaadaa mashiinka xawaaraha dabaysha si loo hubiyo, haddii uusan la kulmin shuruudaha lagu badalayo shaandhada.
3, bedel heerkulka sare iyo miiraha waxtarka sare si aad uga taxaddarto, ma dhaawici karto xadka iyo shaandhada.
Saameyn ku yeesho sababaha nolosha Filterka, marka lagu daro faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada shaandhada, waxaa jira laba sababood:
Sababta ugu horeysa, adeegsiga aag balaaran oo miiraha ah ayaa si weyn u dheereeya nolosha adeegga, waxaa ugufiican in la tixgeliyo tan markii naqshadeynta, mashruuca la dhameystiray kadib isbadalka nidaamka si loo kordhiyo nolosha nidaamka dhibaatada. .
Sababta labaad, waxaad hagaajin kartaa waxtarka miiraha ee Sifeeyaha Hawada, boodhka ku jira miiraha hore ee ka baxsan miiraha. Tusaale ahaan, dhamaadka miiraha waa F7, isticmaalka G4-ka-sii-shaandheynta marka dhammaadka nolosha miiraha ay tahay 3 bilood; u wareeji shaandhada pre-F5 ka dib dhammaadka nolosha miiraha ee la kordhiyay illaa lix bilood. Qolka nadiifka ah, qiimaha dhamaadka shaandhada waxtarka sare ma badna, laakiin halista bedelida miiraha iyo dusha sare ayaa sarreysa, iyo beddelka shaandhada horay ujooga oo aan istaagin, sidaa darteed milkiilayaasha khibrada leh ayaa diirada saari doona lacagta iyo lacagta ku jirta shaandhada hore Qalabka.
HOREWaa maxay sababta iska caabinta Filterka waxtarka leh uu wax ku ool u yahay